Fotoana tsara indrindra avy amin'ny dinidinika Oprah an'i Priyanka Chopra - News
Indian Fitaizana Vaovao Momba Ny Lamaody Amboary Eo Noho Eo Iraisam-Pirenena Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Fahalalana & Fanabeazana Fahasalamana Fampihenan-Danja Celeb Style
Fotoana 5 tsara indrindra sy manaitra indrindra tamin'ny resadresaka vaovao nataon'i Priyanka Chopra tamin'i Oprah
Voalohany, izany dia Prince Harry sy Meghan Markle . Avy eo, i Chip sy Joanna Gaines. Ary ankehitriny, i Oprah Winfrey mipetraka amin'ny resaka hafa rehetra — fa amin'ity indray mitoraka ity dia miaraka amin'i Priyanka Chopra.
Vao tsy ela akory izay ilay mpilalao sarimihetsika dia nipetraka tamina tafatafa tamina resadresaka tamina seho fampahalalam-baovao tamin'ny mogul media, Super Soul , izay mandeha ankehitriny ao amin'ny Discovery +. Toy ny fampielezam-peo manaitra miaraka amin'ny Duke sy Duchess of Sussex, lovia Chopra amin'ny lohahevitra tsy miankina, anisan'izany ny zavatra rehetra avy aminy Mariazy 2018 miaraka amin'i Nick Jonas tamin'ny zavatra niainany tamin'ny sehatry ny fialamboly amin'ny maha mpilalao sarimihetsika Indiana azy.
teny fohy momba an'i reny
Tohizo ny famakiana mandritra ny fotoana tsara indrindra.
Andrew Lipovsky / NBCUniversal / Getty Images
1. Mbola tsapany ihany ny fisian'ny dadany
Chopra dia nanambara fa ny fotoana tiany indrindra tamin'ny fampakaram-badiny roa andro dia ny nandehanan'ny reniny, Madhu azy teny an-dalantsara, hisolo an'i Ashok rainy efa nodimandry. Ny reniko nandeha teo amoron-dalana dia fotoana lehibe tokoa, hoy izy tamin'i Winfrey. Natoloko ny tanako ho tonga ny reniko, ary tsapako tamin'ny fomba lehibe toy izao ny fanatrehan'ny dadako tamin'izay fotoana izay.
2. Nianatra nijoro tamin'ny tenany izy
Niaiky i Chopra fa manenina noho ny tsy niatrehany talen'ny tsy fantatra anarana, izay nangataka azy hanao dihy mihantsy. Natahotra be aho, hoy izy nitadidy. Vaovao aho tamin'ny sehatry ny fialam-boly ary nolazaina foana ny zazavavy fa 'tsy te hanana laza ho sarotra iasana ianao.' Noho izany, niasa tao anatin'ny rafitra aho.
Hatramin'izay dia nianatra hanome lanja ny lanjan-tenany mihoatra ny zavatra hafa rehetra ilay mpilalao sarimihetsika. Nasaina nanana hevitra tao amin'ny efitrano tsy nifanaraka tamiko aho, hoy i Chopra nanampy. Nampahery ahy foana ny hanana feo.
3. Manome voninahitra ny reniny ho an'i Nick Jonas izy
ny Quantico Niaiky i alum fa tsy nieritreritra izy fa ny fifandraisany tamin'i Jonas dia zava-dehibe rehetra tany am-piandohana. Na izany aza, nomeny voninahitra ny reniny tamin'ny famehezana ny fifanarahana. Tena mino aho fa naneho azy ny reniko, hoy ny fanazavany.
Nanohy nanenjika ny vadiny i Chopra, ary nanampy hoe, Tsy nisy nahagaga ahy mihoatra noho izy. Lehilahy matoky tena toy izany izy. Fa saina. Tena faly amin'ny zava-bitako aho. Ny nofiko. Fiaraha-miasa tena izy [tena] izay anolorany ahy amin'izay rehetra ataontsika.
4. iharan'ny herisetra izy
Raha niresaka momba ny fahazazany i Chopra dia nanazava fa nampijaliana azy noho ny lokon'ny hoditra. Sarotra ihany ny lisea. Ary mba hahatongavana amin'ny taona, hahatakatra ny vatanao amin'ny maha-vehivavy anao, hanambaniana anao amin'ny zavatra tsy azoko ovaina, dia voakasik'izany lalina aho, hoy izy.
5. Te hanome ohatra izy
Chopra dia nanambara fa ny ray aman-dreniny dia namela ohatra mendri-piderana ho azy sy ny rahalahiny, Siddharth. Niangavy ny ray aman-dreny aho mba hankamamin'ny zanany, lazao azy ireo fa zava-dehibe ny fomba fijerin'izy ireo, tsy ny enta-mavesatra amin'izy ireo amin'ny nofinofiny, fa ny mamela ny zanakao hanana ny nofinofisin'izy ireo, hoy hatrany izy.
Mijanona ho vaovao hatrany amin'ny tantara rehetra amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana eto.
Mifandraika: Henoy ny 'Royally obsessed', ilay Podcast ho an'ny olona tia ny fianakavian'ny mpanjaka
Priyanka Chopra's Top Picks:
Akanjo famonosana DVF Phoenix Mesh Wrap
498 $ Hividy izao
Sunglass metal metal gradient metaly
460 $ Hividy izao
Akanjo akanjo ba akanjo ba Maybelle Mock Neck
$ 98 Hividy izao
Stuart Weitzman Ledyland
400 $ Hividy izao
Sokajy Tsy Maintsy Jerena Fitiavana Firaisana Drafitra Sy Torohevitra
ny fomba fametrahana voninkazo amin'ny volo ho an'ny fampakaram-bady Indiana
fantsom-pahasalamana tsara indrindra amin'ny youtube
sarimihetsika romantika ambony amin'ny Hollywood
ny fomba mampihena ny volo latsaka noho ny dandruff
vahaolana amin'ny olana mianjera volo